Nagarik Shukrabar - कसलाई वास्तविक पुरुष भन्ने ?
शनिबार, ०६ कार्तिक २०७८, ०७ : १०
कसलाई वास्तविक पुरुष भन्ने ?
शुक्रबार, ०९ फागुन २०७६, ०१ : ५० | प्रकाश जंग थापा
अधिकांश मानिसको वास्तविक पुरुष, पूर्ण पुरुष अथवा मर्द कस्तो हुनुपर्छ भन्नेबारेमा केही स्टेरीओटाइप (रुढिवादी मान्यताहरु) हुन्छन्। जस्तो उनीहरु शारीरिक रुपमा सुगठित ६ फिट अग्लो, बहिर्मुखी स्वभावको, राम्रो पहिरन लगाउने, आकर्षक व्यक्तित्वको धनी, बोलीमा गहिराइ भएको केटा मान्छेलाई नै वास्तविक पुरुष वा मर्द पुरुषको रुपमा चित्रण गर्छन्। उदाहरणार्थ ब्राड पिट, आर्नोल्ड स्वर्जनेगर, भिन डिजेल, जेम्स बोन्ड जस्ता हलिउडका चरित्र अभिनेताहरुलाई असली पुरुषका रुपमा स्वीकार गर्छन्। जुन सरासर गलत हो। उसो भए कस्ता व्यक्तिलाई वास्तविक पुरुष, पूर्ण पुरुष अथवा असली मर्द मान्ने?
विज्ञ, सेल्फ हेल्प गुरु एवं आध्यात्मिक गुरुअनुसार वास्तविक पुरुषको निम्न विशेषताहरू छन्:
वास्तविक पुरुषले उद्देश्यसहितको जीवन बाँचेको हुन्छ। केका लागि जन्मेको, के गर्दै छु र कुन दिशातिर उन्मुख छु भन्नेबारेमा ऊ स्पष्ट हुन्छ। यति मात्र होइन, ऊसँग भविष्य निर्माणको मानचित्र पनि हुन्छ। यस मानचित्रलाई यथार्थमा परिणत गर्न कुनै पनि चुनौती मोल्न तयार हुन्छ। उद्देश्य नजिक नलैजाने कुनै पनि कार्यमा ऊ आबद्ध हुन चाहँदैन। जीवन उद्देश्य अथवा भविष्य निर्माण कार्य र महिलामध्ये कुनै एक छनोट गर्नुपरे उसले जीवन उद्देश्य छनोट गर्छ। कारण ? उसले जीवन उद्देश्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको हुन्छ न कि महिलालाई। महिला त उसको तेस्रो वा चौथो प्राथमिकतामा पर्न सक्छ।
वास्तविक पुरुष बन्न महिला जस्तै व्यवहार गर्नोस्। महिलाको गुणहरू आत्मसात गर्नोस्। यो एउटा काउन्टर इन्टुअटिभ मुभ, कदम हो। यही कदम चाल्ने कोसिस गर्नोस्। अर्थात् भावनात्मक हुने, प्रेमिल हुने, समानुभूति भाव राख्ने, सबैको ख्याल राख्ने, विनम्र हुने, मनमा लागेको खुलस्त भन्ने, रोमान्टिक बन्ने तथा रुने गर्नोस्। तपाईं आकर्षक महिलासामु रुन सक्नुहुन्छ भने त्यसले तपाईंको पुरुषत्व मापन गर्छ न कि तपाईंको नामर्दपनको पुष्टि गर्छ। यहाँ रुने भन्दैमा जतिबेला पनि महिलाको अगाडि रुने भन्ने अर्थ नलागोस्। रुवाइ महिला आकर्षित गर्ने सस्तो हतियारको रुपमा प्रयोग गरिनुहुँदैन भन्ने अर्थ लाग्छ। कृत्रिम रुवाइले आकर्षण होइन विकर्षण बढाउँछ। त्यसैगरी प्रायः महिलाले गर्ने कार्यमा पनि सक्रिय हुनोस्। जस्तो खाना पकाउने, भाँडा माझ्ने, सेलरोटी पकाउने, टपरी बनाउने, योगा गर्ने आदि। जब तपाईं यस्ता गतिविधिहरु गर्नुहुन्छ, महिलाहरु तपाईंप्रति आकर्षित हुन्छन्। तपाईंलाई प्रगाढ प्रेम गर्छन्। त्यसैले वास्तविक पुरुष बन्न महिलाको जस्तै व्यवहार र गतिविधि निष्पादन गर्नोस्।